Maqal: Duqa Boosaaso oo ka warbixiyay Roobab ka da’ay Boosaaso iyo Hareraheeda – SBC
Maqal: Duqa Boosaaso oo ka warbixiyay Roobab ka da’ay Boosaaso iyo Hareraheeda
Posted by Webmaster on Aktoober 25, 2012 Comments
Roobab Waaweyn oo ka da’ayay Xalay gelinkii dambe Maanta oo dhan iyo caawa Deegaano ka mid ah Gobolka Bari gaar ahaan Magaalada Boosaaso iyo hareeraheeda ayaa waxaa ka dhashay daadad waaweyn oo ku soo rogmaday Togag magaalada duleedkeeda ku yaala.
Daadadkan soo rogmaday ayaa la tagay Birihii ku jiray Buundo duleedka ka xigta Magaalada halkaas oo uu ku go’aay laamigii isku xirayay Magaalada iyo deegaanada kale ee Puntland.
Duqa degmada Boosaaso Xasan Cabdala xasan oo la hadlay caawa SBC ayaa xaqiijiyay dhacdan isagoona intaasi ku daray in goobta uu ka go’ay Laamigu geeyeen ciidan xireena si aan dhibi uga dhicin.
Waxaa kale oo uu duqu sheegay in gaadiidka ay soo galaya magaalada iyo kuwa kabaxayaba ay ka wareegayaan wado kale oo dhanka xeebta ah xigta, waxaanu intaasi ku daray in Biyo badani oo soo rogmaday marayaan Togaga ku dhow magaalada.
Dhanka kale Xasan Cabdala Xasan Duqa Degmada Boosaaso ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Reer Puntland iyo Boosaaso Maalinta Ciidul adxa isagoona ugu duceeyay Ciidan ciideeda in ay ku gaaraan Barwaaqo.
Waxa uu sidoo kale duqu ka hadlay goobaha lagu oogayo Salaada ciida ee Berito Maadaama Magaalada Boosaaso ay ka de’een Roobab waaweyn maanta islamarkaana biya dhigay goobihii ay dadku isugu soo bixi jireen kuna oogi jireen Salaada Ciidka